ရေနွေးနဲ့ ဖြန်းပက်တဲ့ပွဲတော်ရနှေေးနဲ့ ဖွနျးပကျတဲ့ပှဲတျော | wafulu
ရေနွေးနဲ့ ဖြန်းပက်တဲ့ပွဲတော်ရနှေေးနဲ့ ဖွနျးပကျတဲ့ပှဲတျော
“ ရေနွေးနဲ့ ဖြန်းပက်တဲ့ပွဲတော်” ဆိုတာ ရောဂါတွေအားလုံးကိုပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ပြောခြင်းခံရတဲ့Kanagawaခရိုင် Yugawaraမြို့မှ ရေပူစမ်းမှရေနဲ့ ဘုရားထမ်းစင်ကို ဖြန်းပက်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့ ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်. ရေပမာဏက အကြမ်းအားဖြင့် ၆၀တန်ဖြစ်ပါတယ်. ပရိသတ်မှလည်း ဘုရားထမ်းစင်ကို ဦးတည်ပြီး အရှိန်ဖြင့် ဖြန်းပက်ကြပါတယ်.
ရောဂါတွေအားလုံးကိုပျောက်ကင်းစေတာကြောင့် အကြီးအကဲတွေအထိဆက်သရတဲ့ Yugawaraမြို့မှ ရေပူစမ်းဖြစ်ပါတယ်.” ရေနွေးနဲ့ ဖြန်းပက်တဲ့ပွဲတော်” မှာ လမ်းအတွင်း ဘေးကင်းမှုကိုဆုတောင်းပြီး ရေနွေးကိုဖြန်းပက်ပြီး အန္တရာယ်ကင်းစေရာမှစပြီး လမ်းဘေးမှနေပြီး ဘုရားထမ်းစင်ကို ဖြန်းပက်တဲ့ ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်.
“ ရနှေေးနဲ့ ဖွနျးပကျတဲ့ပှဲတျော” ဆိုတာ ရောဂါတှအေားလုံးကိုပြောကျကငျးစတေယျလို့ပွောခွငျးခံရတဲ့Kanagawaခရိုငျ Yugawaraမွို့မှ ရပေူစမျးမှရနေဲ့ ဘုရားထမျးစငျကို ဖွနျးပကျပွီး အန်တရာယျကငျးစတေဲ့ ပှဲတျောဖွဈပါတယျ. ရပေမာဏက အကွမျးအားဖွငျ့ ၆၀တနျဖွဈပါတယျ. ပရိသတျမှလညျး ဘုရားထမျးစငျကို ဦးတညျပွီး အရှိနျဖွငျ့ ဖွနျးပကျကွပါတယျ.
ရောဂါတှအေားလုံးကိုပြောကျကငျးစတောကွောငျ့ အကွီးအကဲတှအေထိဆကျသရတဲ့ Yugawaraမွို့မှ ရပေူစမျးဖွဈပါတယျ.” ရနှေေးနဲ့ ဖွနျးပကျတဲ့ပှဲတျော” မှာ လမျးအတှငျး ဘေးကငျးမှုကိုဆုတောငျးပွီး ရနှေေးကိုဖွနျးပကျပွီး အန်တရာယျကငျးစရောမှစပွီး လမျးဘေးမှနပွေီး ဘုရားထမျးစငျကို ဖွနျးပကျတဲ့ ခမျးနားတဲ့ပှဲတျောဖွဈပါတယျ.
Yukake Mathuri” isafestival in Yugawara-shi, Kanagawa Prefecture. The audience exercisesahot spring onashrine.
The amount of hot spring is about 60 tons.
It is said that hot springs in Yugawara were presented to shoguns because they work for all kinds of diseases.
People prayed for safety on the road, wrapped with hot water and gaveamagazine.
It looksabit like Myanmar’s watering festival.
Shimaneခရိုင် Akagawaပိုးစုန်းကြူးShimaneခရိုငျ Akagawaပိုးစုနျးကွူး »